Aluminium Tripolyphosphate, Zinc Phosphate, Girazi Flake - Noelson
Speciality Anti-ngura Pigment
Phosphate Anti-ngura Pigment
Complex Inorganic Ruvara Pigment & Yakasanganiswa Metal oxide Pigment
Iron Oxide Nguruve
Isina kujairika Rangi
Girazi Flake & Girazi Microsphere
Inoitisa & Anti-kunofambira mberi Pigment
MIOX Kupesana nekuparadza Kuputira
Organic Uye Inorganic Zinc Yakapfuma Kuchengeta
Mvura-yakavakirwa Anti Corrosion Coating
Simbi Sisitimu Anticorrosive Kuputira
Mvura-yakavakirwa Uye Solvent- yakavakirwa Shop Primer
Girazi Flake Kuputira
Phosphate Rinoshanda Antirust unhani
Nyowani Multi-Surface Kupfeka Inodzivirira Kurwisa COVID-19
2020 Yepasi Pese Pamusoro 10: Pamusoro Paint uye Makambani Ekupfeka
NOELSON Zvigadzirwa Zvinoshandiswa Kune Anti-ngura.
NOELSON CHIKAMU CHEMAZWI
Kuti uwane anovimbika uye mukurumbira mutengesi uye mudiwa, ndapota enda kuna Noelson Chemicals.
INOKOSHA ANTI-CORROSION PIGMENT
Gore rega rega, iyo simbi inotsiviwa nekuda kwegora inodhura anodarika madhora zana emabhiriyoni pasirese. Iyo pigment iyo inoderedza iyo ngura inodhura ndeye anti-ngura pigments. Noelson Chemicals anga achigadzira nekugadzira anti-corrosion pigments kubvira 1996, zvigadzirwa zvedu zvinobva pane zvisina kujairwa mafirita kusvika kune akasarudzika anti-corrosion pigments.
Noelson Chemicals anga achigadzira nekugadzira Phosphate anti-corrosion pigments kubvira 1996. Zvigadzirwa zvedu zvinosanganisira kubva kuZinc Phosphate, Compound Zinc Phosphate, Phosphorus Zinc Chromate, Aluminium Tripolyphosphate, Orthophosphate & Polyphosphate uye Spectrum Phophates.
DZAKANAKA INORGANIC KORORI PEGI & MIXED METAL OXIDE PIGMENT
Complex Inorganic Ruvara pigments mhinduro dzakasimba kana macomputer anosanganisira maviri kana anopfuura esimbi oxides, imwe oxide inoshanda senge inomiririra uye imwe oxides inopindirana mukati memubati crystal lattice. kupindirana uku kunoitwa patembiricha kazhinji 700-1400 ℃. Noelson Chemicals inopa yakazara phaleti yezvisina kugadzirwa nemavara mhinduro inokupa iwo iwo akasimba mavara iwe aunoda epurasitiki rako, rabha, machira, inki, kuvaka uye ceramics.
DZIVA OXIDE PIGMENT
Iron oxide ndeimwe yeanopokana-ngura pigments. Yedu yesimbi oxide pigments, inoratidzwa neakajeka esimbi oxide uye ultramarine bhuruu, ndeaya maviri esimbi oxide zvigadzirwa Noelson Chemicals zvakagadzirirwa vatengi.
Inorganic pigment inoratidzirwa ne eco-yakanaka uye yakawanda. Noelson Chemicals yakatsaurirwa mukusimudzira uye kugadzira kweanogadzira pigments kubvira 1996.
Girazi YEMAHARA & Girazi MICROSPHERES
Ichitevera maJapan Nippon Girazi uye makambani eBritish Glass Flake, Noelson Chemicals ndiyo yepasi rese vagadziri veGirazi Flake vagadziri. Zvigadzirwa zvedu zvinotangira kubva kuC kusvika E-girazi flake, kune girazi microspheres uye zvedongo microspheres.
KUDZIDZISA & ANTI-STATIC PIGMENT
Kubva payakavambwa muna 1996, Noelson Chemicals yakawana mukana wayo wekukwikwidza mu conductive & anti-static pigment. Zvigadzirwa zvedu zvinopa indasitiri inotungamira resistivity pamutengo wemutengo.
Iwo akanakisa mhando + ekugadzira matekiniki + Mutengo mukana, ita Noelson Makemikari arambe achikunda anotungamira uye kutenderera ramangwana!
Plastic & rabha
About Noelson Makemikari
Yakavambwa muna1996, Noelson Chemicals inogadzira yakazvimiririra yemakemikari akakosha, Nekugadzwa kwaNoelson Chemicals Nanjing Ltd., Noelson Chemicals Shanghai Ltd. naNoelson Int'l HongKong, tinoshandisa matekinoroji ekucheka-kugadzira micro-upfu , anti-ngura, inoshanda, inoitisa uye inorwisa static pigments. Zvigadzirwa zvedu zvinovimbwa uye zvinozivikanwa nemazita makuru epasirese mazita.
NOELSON ZVINOKOSHA ZVINHU
Vakanaka kwazvo Ferro-phosphorus Powder
Inoitisa Titanium yakasviba
Zinc phosphate aruminiyamu
Solid Magirazi Microspheres
Inoitisa Mica Powder
Complex Inorganic Ruvara Pigment
Remubatanidzwa Ferro TitaniumI Tsvuku
Yakajeka Iron oxide
Remubatanidzwa Ferro-Titanium Powder
Room2113, Fangzheng Chivakwa, 1122 Xinjinqiao Rd. 201206, Shanghai, China.
Mazuva manomwe pavhiki kubva 9:00 am kusvika 5:00 pm
Noelson Chemicals anobata mweya wekubatana sehupenyu hwekambani, isu tinokoka uye tinoshanda pamwe neakawanda masisitimu ekutsvagisa ehunyanzvi mukati nekunze kwenyika, kuunganidza vanhu nemano ...